Bit By Bit - အနာဂတ် - 7.2.1 Readymades နှင့် Custommades ၏ရောနှောခြင်း
စင်ကြယ်သော Readymade ဗျူဟာမသန့်စင်သော Custommade ဗျူဟာကိုမတည်မအပြည့်အဝဒီဂျစ်တယ်ခေတ်များ၏စွမ်းရည်များအသုံးချ။ အနာဂတျတှငျကျွန်တော်တို့ hybrids တွေကိုဖန်တီးသွားကြသည်။
နိဒါန်း၌ငါသည် Michelangelo ရဲ့ Custommade စတိုင်နှင့်အတူ Marcel Duchamp ၏ Readymade စတိုင်နှိုင်း။ ဒီနှိုင်းယှဉ်လည်းဒေတာ Readymades နှင့်အတူအလုပ်လုပ်လေ့ရှိပါတယ်တဲ့သူသိပ္ပံပညာရှင်တွေ, နှင့် Custommades နှင့်အတူလုပ်ကိုင်ဖို့လေ့အဘယ်သူသည်လူမှုရေးသိပ္ပံပညာရှင်တွေ, အကြားတစ်ဦးခြားနားချက်ဖမ်းယူ။ အနာဂတျတှငျသို့သော်ဤစင်ကြယ်သောချဉ်းကပ်မှု၏အသီးအသီးကန့်သတ်ကြောင့်ငါတို့သည် သာ. hybrids တွေကိုမြင်ရလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ကြသည်။ သာ Readymades အသုံးပြုချင်သူအသုတေသီများသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အများအပြားလှပသော Readymades မျှမရှိကြောင့်ရုန်းကန်သွားကြသည်။ ထို့ကြောင့်ဤစင်ကြယ်သောစတိုင်မှကပ်သုတေသီများဖြစ်စေရုပ်ဆိုး Readymades အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်အရည်အသွေးပြည့်ယဇ်ပူဇော်ခြင်းအသွားကြသည်, ဒါမှမဟုတ်သူတို့စုံလင်သောဆီးရှာနေအချိန်အများကြီးဖြုန်းဖို့သွားနေကြပါတယ်။ သာ Custommades အသုံးပြုချင်သူအသုတေသီများ, အခြားတစ်ဖက်တွင်, စကေးယဇ်ပူဇော်ခြင်းအသွားကြသည်။ Hybrid ကိုချဉ်းကပ်, သို့သော်, Custommades ထံမှလာသည်ဟုမေးခွန်းနှင့်အချက်အလက်အကြားတင်းကျပ်စွာမထိုက်မတန်နှင့်အတူ Readymades နှင့်အတူကြွလာသောစကေးပေါင်းစပ်နိုင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့လေးယောက်ပင်ကိုယ်မူလအခန်းကြီးအသီးအသီးတွင်ဤ hybrids တွေကို၏ဥပမာကိုမြင်တော်မူ၏။ အခန်း2မှာ, ကျနော်တို့က Google တုပ်ကွေး Trends ပိုမြန်ခန့်မှန်းချက်ထုတ်လုပ်ရန်တစ်ဖြစ်နိုင်ခြေ-based ရိုးရာတိုင်းတာခြင်းစနစ် (အ CDC တုပ်ကွေးရောဂါစောင့်ကြည့်သည့်စနစ်) နှင့်တစ်ဦးကအမြဲတမ်း-အပေါ်ကြီးမားတဲ့ဒေတာစနစ် (ရှာဖွေရေးမေးမြန်းချက်) ပေါင်းစပ်ပုံကိုမွငျလြှငျ (Ginsberg et al. 2009) ။ အခန်း3မှာ, ကျနော်တို့ဘယ်လိုစတီဖင် Ansolabehere နှင့် Eitan Hersh ကိုမြင်လျှင် (2012) တကယ်မဲပေးသောလူများ၏ဝိသေသလက္ခဏာများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ရန်အတွက်အဆင်သင့်လုပ်အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးဒေတာနဲ့ပေါင်းစပ်ထုံးစံလုပ်စစ်တမ်းဒေတာ။ အခန်း4မှာကျနော်တို့ကအကြီးအကျယ်စကေးမှာအပြုအမူအပေါ်လူမှုရေးစံချိန်စံညွှန်း၏သက်ရောက်မှုကိုလေ့လာရန်စိတ်ကြိုက်လုပ်ကုသမှုနှင့်အတူအဆင်သင့်လုပ်လျှပ်စစ်မီးတိုင်းတာခြင်းအခြေခံအဆောက်အဦများပေါင်းစပ်ကြောင်းမည်သို့ OPower စမ်းသပ်ချက်ကိုမြင်လျှင် (Allcott 2015) ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့အခန်း5မှာငါဖြစ်သူ Kenneth Benoit နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကဘယ်လိုပြော (2015) သုတေသီများလေ့လာဖို့လိုအသုံးပွုနိုငျကွောငျးကိုဒေတာဖန်တီးနိုင်ရန်အတွက်နိုင်ငံရေးပါတီများအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးစာတမ်းတွင်တစ်ဦးအဆင်သင့်လုပ်ထားမှစိတ်ကြိုက်လုပ်လူစုလူဝေး-coding process ကိုလျှောက်လွှာတင်ခဲ့တယ် ရွေးကောက်ပွဲနှင့်မူဝါဒဆွေးနွေးငြင်းခုံ၏ဒိုင်းနမစ်။
ဤရွေ့ကားလေးဥပမာရှိသမျှတို့ကိုအနာဂတျမှာအားကောင်းတဲ့မဟာဗျူဟာသုတေသနများအဘို့ထိုသူတို့ကပိုသင့်လျော်သောအပိုဆောင်းသတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူသုတေသနအတွက်စုဆောင်းကြသည်မဟုတ်သောကြီးမားတဲ့ဒေတာအရင်းအမြစ်, ကြွယ်ဝစေရန်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကိုပြသ (Groves 2011) ။ ထိုသို့ Custommade ဒါမှမဟုတ် Readymade နှင့်အတူစတင်သည်ပဲဖြစ်ဖြစ်, ဒီမျိုးစပ်စတိုင်များစွာကိုသုတေသနပြုမှုပြဿနာများသည်အလွန်ကြီးဂတိတော်ကိုရရှိထားပါသည်။